Teknolojia manapaka-Edge ho an'ny mpampiasa antonony
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Teknolojia manapaka-Edge ho an'ny mpampiasa antonony
Ahoana ny fahitanao azy raha lahy aho? Andriambavy? Saka? Mety amiko ve ity akanjo ity? Mifanaraka amin'ny masoko ve io loko io? Aza mieritreritra intsony fa zahao fotsiny!
Te haka sary an-tsaina ny tenanao ho kintana faran'izay lehibe ve ianao? Sa angamba ianao nieritreritra ny hanova ny taovolo, toa an'i Angelina Jolie? Fantatro izay afaka manampy anao! Ny fahaizana soloy tarehy ny sary tena tadiavina amin'izao fotoana izao ho an'ny filan'ny tena manokana sy ho an'ny matihanina, fa ny mpankafy afaka mahazo azy io ho tsotra sy mora kokoa noho ny taloha.
Azonao atao ny misintona rindrambaiko samihafa amin'ny Google Play na Apple Store anao, fa ianao irery no hanao ny zava-drehetra. Ny app Retouch Me dia iray tokana eny an-tsena - programa miorina amin'ny antsipirihany tsara ity. Ny zava-drehetra dia hataon'ny manam-pahaizana fa tsy ianao. Manokana fiheverana manokana ny sary, ny lokon'ny hoditrao, ny volonao, ny volonao, ary na ny fitafianao aza! Ho tanterahina tsara ny zavatra rehetra - izany no antony lehibe mahatonga ny mpanjifa maro hanome ny tiany kokoa ny RetouchMe.
Ny tombony lehibe amin'ity programa ity dia ny hoe tsy ny sary ihany no azonao ovaina fa ny horonan-tsary koa. Azonao atao ny manampy sivana, effets ary zavatra ilaina hafa. Matoky aho fa ho taitra ny namanao - tsy holazain'izy ireo raha sary / horonantsary tena izy na tsia!
Ahoana ny fomba hisafidianana sary loharano
Raha tsy misy fisalasalana, ny valiny dia tsy dia hahagaga toy ny efa nampoizina, raha tsy ampy kalitao ireo sary tany am-boalohany nofidina ho fanodinkodinana fanampiny. Na ny programa mandroso indrindra aza tsy ho afaka hiatrika an'io fanamby io amin'ny fomba lavorary, ka anjaranao io asa io. Ny fiheveranao ny antsipiriany dia hanampy amin'ny fanaovana sary tena izy amin'ny farany. Mba hahatonga ny collage ho voajanahary, aza misalasala mandinika ireto toro-hevitra manaraka ireto:
Ny fitovian'ny zoro tarehy amin'ny sary roa dia tena zava-dehibe. Makà sary amin'ny zoro akaiky araka izay tratra.
Tsara kokoa ny mandingana ny sary izay manelingelina ny antsipirian'ny tarehy ny tanana, ny volo na ny zavatra hafa.
Tsy tokony hasaina mampifangaro sary amin'ny hazavana namboarina sy voajanahary isika. raha manao zavatra toy izany ianao dia hitaky fanodikodinam-bola bebe kokoa mba hahatonga ny sary ho voajanahary.
Ny famahana ny sary dia tokony hitovy mba hisorohana ny loza mety hitranga amin'ny valiny tsy mahafa-po.
Rehefa tsy azonao antoka raha mifanaraka tsara ireo sary voafantina dia manandrama fanovana iray fotsiny hahafantarana ny fomba fiasan'ny programa sy ny toerana hametrahana ireo lantom-peony.
Fidirana amin'ny serivisy
Ny sary iray naverina indray dia mitentina 99 cents, na azo aloa amin'ny Internet izany amin'ny fanaovana asa.
Tena mora ny mampiasa azy:
misintona ny fampiharana;
misafidy sary iray hanovana;
manapa-kevitra izay safidy hampiasaina (amin'ny tranga misy anay - fanovana tarehy);
alefaso amin'ny mpamorona antsika mivantana amin'ny app izany;
andraso minitra roa dia mahazoa valiny mahafinaritra.
Raha tsy vazivazy ianao - ity no fomba tsara indrindra hampifaliana ny tenanao. Ankoatr'izay, fomba tsara iray hitsapana ny eritreritrao sy ny fahatsapanao ny firindrana sy ny fandanjana. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny antsipirian'ny sary samihafa, dia tongasoa ny mpanjifa hahazo aingam-panahy amin'ny famolavolana sy tetik'asa vaovao, indrindra raha toa ka mazoto miasa amin'ity sehatra ity izy ireo.